ओलीले बोलाए एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठक, सांसदमाथिको कारबाही अघि बढ्ला? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:११ Basanta Khanal	0 Comments	एमाले आयोजक कमिटीको बैठक
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी (केन्द्रीय कमिटी) को आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। आइतबार बिहान १० बजे बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्नेछ।
माधव नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे छलफलका लागि बैठक डाकिएको एक सदस्यले बताए। स्पष्टीकरण सोधिएका अधिकांशले आफ्नो जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
स्पष्टीकरणको कारबाही रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा समेत आजै सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ। कारबाहीबारे न्यायिक परीक्षण हुनुभन्दा केही समयअघि ओलीले बैठक डाकेका हुन्।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज- १२ बैशाख २०७८ आइतवारको राशिफल पढौं
सेयरबाटै संसार जितेका वारेन बफेटले कसरी लगानी गर्छन् , आखिर के छ त्यस्तो जादु ? →